Comparing the Parinirvāṇa Scene in Buddhist Murals of Myanmar | မြန်ြာနှိိုင်ငံရှှိ ဗိုဒ္ဓဝင်နံရံဆ ေးဆရေးပန်ေးခ ျီြ ာေးြှ ပရှိနှိဗဗာန်စံခန်ေးကှိို နှိှိုင်ေးယှဉ်မခင်ေး | SPAFA Journal
Aye Aye Oo Dagon University
Maha Parinirvāṇa Sutta, wall paintings, Bagan, Myanmar | ဆသာဲ့ခ က်ဆဝါဟာရြ ာေး- ြဟာပရှိနှိဗဗာနသိုတတ၊, နံရံဆ ေးဆရေးပန်ေးခ ျီ၊, ပိုဂံ၊, မြန်ြာ၊
From the beginning of the Bagan period (11th century CE), Buddha’s Parinirvāṇa Scene has been depicted on wall paintings in religious buildings and hollow vaulted temples at various places of middle Myanmar. It is found that wall paintings based on the Maha Parinirvāṇa Sutta vary in layout and size from period to period with Buddhist literature: just as single-scenes and small or large wall paintings were depicted during the Bagan period so also were depictions of multiple scenes made in the late Konbaung Period. Further additions were introduced in depictions of Buddha’s Parinirvāṇa in the late Bagan Period. When studying the Buddha’s Parinirvāṇa scene on wall paintings, the depicting styles and colour changed from period to period. Depending on the colour, the periods can be interpreted definitely. Wall paintings depicting the Parinirvāṇa Sutta at temples located in Bagan and middle Myanmar regions are compared among themselves to show differences and similarities. Accounts of the purported events surrounding the Buddha's own Parinirvāṇa are found inawide range of Buddhist countries of South East Asia. This paper concludes that the hypothesis is viable, with comparisons with the wall paintings depicting Buddha’s Parinirvāṇa Scene in Myanmar and how the style changed and transformed.
မြန်ြာနှိိုင်ငံအလယ်ပှိိုင်ေးဆနရာအနှံှံ့အမပာေးတွင် ပိုဂံဆခတ်အဆစာပှိိုင်ေးကာလ(၁၁ရာစို)ြှစ၍ ဗိုဒ္ဓ၏ပရှိနှိဗဗာန်စံခန်ေးကှိို ဘာသာ ဆရေး ှိိုင်ရာ အဆ ာက်အဦေးအြ ှိြုေးြ ှိြုေးနှငဲ့် ဂူဘိုရာေးဝတ်မပြုဆက ာင်ေးြ ာေး၏နံရံြ ာေးတွင် သရိုပ်ဆ ာ်ဆရေး ွွဲခွဲဲ့ကကသည်။ ြဟာပရှိ နှိဗဗာနသိုတတံကှိို အဆမခခံဆသာ နံရံဆ ေးဆရေးပန်ေးခ ျီြ ာေး၏ အခင်ေးအက င်ေး၊ အရွယ်အစာေးြ ာေးသည် ဆခတ်ကာလအလှိိုက် ကွွဲမပာေး မခာေးန ေးြှိုရှှိပပျီေး ပိုဂံဆခတ်ကာလက ဇာတ်ကွက်တစ်ကွက်ကှိိုသာ အရွယ်အစာေးအာေးမ ငဲ့် ကကျီေးသည်မ စ်ဆစ၊ ငယ်သည်မ စ်ဆစ နံရံဆ ေးဆရေးပန်ေးခ ျီတွင် သရိုပ်ဆ ာ်ဆရေး ွွဲဆလဲ့ရှှိပပျီေး ကိုန်ေးဆဘာင်ဆခတ်ဆနှ င်ေးပှိိုင်ေးကာလတွင် ဇာတ်ကွက်တစ်ကွက်ထက် ပှိိုြှိို ဆရေး ွွဲလာသည်ကှိို ဆတွွေ့ရှှိရပါသည်။ ဗိုဒ္ဓ၏ပရှိနှိဗဗာန်မပြုပံိုဇာတ်ကွက်အာေး သရိုပ်ဆ ာ်ဆရေး ွွဲရာတွင် ပိုဂံဆခတ်ဆနှ င်ေးပှိိုင်ေးကာ လ၌ ထပ်ြံထညဲ့်သွင်ေးြှိုြ ာေးကှိို မပြုလိုပ်လာကကသည်။ နံရံဆ ေးဆရေးပန်ေးခ ျီြှ ဗိုဒ္ဓ၏ပရှိနှိဗဗာန်ဇာတ်ကွက်အာေးဆလဲ့လာသညဲ့်အခါ သရိုပ်ဆ ာ်ဆရေး ွွဲြှိုပံိုစံြ ာေးနှငဲ့် ဆ ေးဆရာင်မခယ်သြှိုြ ာေးြှာ ဆခတ်ကာလအလှိိုက် ဆမပာင်ေးလွဲလာကကသည်။ ဆ ေးဆရာင်မခယ်သ ြှိုအဆပေါ်ြူတည်၍ ဆခတ်ကာလကှိို အတှိအက ဆ ာ်မပနှိိုင်သည်။ ပိုဂံနှငဲ့်မြန်ြာနှိိုင်ငံအလယ်ပှိိုင်ေးြှ ဘာသာဆရေးအဆ ာက်အဦေးြာေးနှငဲ့် ဂူဘိုရာေးဝတ်မပြုဆက ာင်ေးြ ာေးတွင်ရှှိဆသာ နံရံဆ ေးဆရေးပန်ေးခ ျီြ ာေး၌ ပရှိနှိဗဗာနသိုတတံအာေး သရိုပ်ဆ ာ်ဆရေး ွွဲပံိုြ ာေးအကကာေး ကွွဲမပာေးမခာေးန ေးြှို၊ တူညျီြှိုတှိိုှံ့အာေး မပသနှိိုင်ရန်နှိှိုင်ေးယှဉ်ဆလဲ့လာထာေးပါသည်။ အဆရှွေ့ဆတာင်အာရှြှ ဗိုဒ္ဓဘာသာဝင်နှိိုင်ငံြ ာေးအ ကကာေး ဗိုဒ္ဓ၏ပရှိနှိဗဗာန်စံခန်ေးနှငဲ့်စပ်လ ဉ်ေးသညဲ့်ဆ ာ်မပခ က်ြ ာေးကှိို က ယ်မပနှံ့်စွာဆတွွေ့ရှှိရဆပသည်။ ယခိုစာတြ်ေးသည် အဆရှွေ့ ဆတာင်အာရှနှိိုင်ငံြ ာေးြှ နံရံဆ ေးဆရေးပန်ေးခ ျီြ ာေးတွင် သရိုပ်ဆ ာ်ဆရေး ွွဲထာေးဆသာ ပရှိနှိဗဗာန်စံခန်ေးနှငဲ့်ထှိိုင်ေးနှိိုင်ငံတှိိုှံ့ြှသရိုပ်ဆ ာ် ပံိုြ ာေးကှိို နှိှိုင်ေးယှဉ်ဆလဲ့လာြှိုြ ာေး မပြုလိုပ်နှိိုင်သည်ဟူဆသာ အယူအ ကှိို ဆကာက်ခ က်ခ ထာေးပါသည်။